Shir Madaxeedka IGAD oo Maanta furmaya & Farmaajo oo ka qeyb-galaya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion. Shir Madaxeedka IGAD oo Maanta furmaya & Farmaajo oo ka qeyb-galaya * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Shir Madaxeedka IGAD oo Maanta furmaya & Farmaajo oo ka qeyb-galaya
By Ardaan Yare on 29th November 2019
Magaalada Addis Ababa ee Caasimadda Itoobiya ayaa lagu wadaa in Maanta oo Jimce ah uu ka furmo shir Madaxeedka Urur Goboleedka IGAD,kaas oo ay ka qeyb-galayaan Madax badan oo Afrikan ah.
Shirkaas ayaa waxaa Soomaaliya uga qeyb-galaya Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo,waxaana shirka diirada lagu saarayaa xoojinta iskaashiga ka dhexeeya dalalka Gobolka ee dhinacyada dhaqaalaha iyo nabad galyada.
Sidoo kale, hoggaamiyeyaasha IGAD waxa ay iska xog-wareysanayaan qorsheyaasha lagu guuleystay ee ku aaddan dadaallada lagu xasilinayo waddamada Gobolka, iyaga oo warbixinno ka dhageysanaya Guddi Madaxeedyada u xilsaaran fulinta heshiisyadii hore iyo caqabadaha haatan jira.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa la filayaa in uu khudbad ka jeediyo Shirkaas,isaga oo diiradda ku saari doono aragti siyaasadeed oo wanaagsan iyo warbixino ku saabsan xaalada Soomaaliya.
Inta shirka lagu guda jiro, Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan-doceedyo la qaadan doona Madaxda dalalka Gobolka ee ka qeyb galaya shirka.
“Doorashada kuma dhici karto 60-kii maalmood ee lagu heshiiyay” Xildhibaan Zakariye
Taliska Xoogga Dalka oo ka war bixiyay Qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay Shabeelaha Dhaxe
Lacag la siin jiray ciidamada Kenya ee ka howlgala Soomaaliya oo la dhimay
Xukuumadda oo si toos ah u eedeysay Qoor Qoor oo daahiyay magacaabidda guddi laga sugayay
Ciidamada Puntland oo Al shabaab kala wareegay saldhig muhiim u ahaa
Madaxweynaha Hirshabelle oo kulan la qaatay safiirka UK iyo kulamo ay wada qaateen
Macalinkii xulka qaranka Soomaaliya oo shaqada laga ceyriyey iyo sababta keentay
Golaha wadatashiga qaranka oo la filayo in ay tagaan Kismaayo
Soomaaliya oo dacwad ka dhan ah Kenya u gudbisay golaha ammaanka ee Q.M
Dhalinyaro dooneysay iney ku biiraan Militeriga Soomaaliya oo la isku qarxiyay
Banaabax looga soo horjeedo duqeymaha Kenya oo ka dhacay Gedo
XFS oo gargaarkii ugu horeysay u geysay dadka uu saameeyey fatahaada Webiga Shabelle
Ra’isul Wasaare Rooble oo ka hadlay hogaamintiisa arrimaha doorashooyinka
Puntland oo ay ceeb ka raacday dhalinyaro ay abuubashay iyo mucaaradka oo ka faa’ideysanaya arrinta Eretria
Waalidiintii ubadkooda tababarka loogu qaaday Eritrea oo bannanabax ka dhigay Muqdisho
Wasiir Dubbe oo Beeniyey inay Ciidamada Soomaaliya ka dagaalameen Itoobiya
Kenya oo dib u furtay duullimaadyadii isku xirayay Soomaaliya iyo Kenya